Baphika eyoqhekeko phakathi kweMeya yeTheku nephini layo | isiZulu
Baphika eyoqhekeko phakathi kweMeya yeTheku nephini layo
IMeya yeTheku ithi ngeke kuthengwe izimoto ezintsha - Umbiko
UMasipala weTheku uzoxhasa imindeni yabashonile
Durban – I-DA ikhala ngeMeya yeTheku uZandile Gumede njengoba ithi useqoke ngokungemthetho lowo ozoba yibamba leMeya yaleli dolobha ngesikhathi yena esaphumile kuleli.
Lokhu kuvezwe yisitatimende seqembu ngomlomo womholi walo KwaZulu-Natal, uZwakele Mncwango.
Leli qembu lizwakalisa ukuthi liyaphikisana kakhulu nokuqokwa kukaKhansela uMondli Mthembu ukuba abambe njengeMeya yeTheku, futhi iyaphikisana nokuba abenguSihlalo womhlangano wesigungu esiphezulu sokuphathwa kukamasipala ngoLwesibili ekuseni, njengoba umthetho uthi kumele uGumede aqoke iSekela lakhe, uFawzia Peer, kulesi sikhundla uma engekho.
“Silawulwa umthetho ngakho kufanele ukuthi ulandelwe ngaso sonke isikhathi. Isenzo seMeya senza kucace ukuthi kunokungahoshelani phakathi kwayo noPeer,” kusho uMncwango.
“Akukhona okokuqala iMeya yephula umthetho, angicabangi ukuthi yayihamba iSalga Training ngesikhathi ithatha lesi sikhundla lapho kusuke kuqeqeshwa abaphathi uma bethatha izikhundla.
“Ngithanda ukuthi nje anginankinga yokumsiza uMeya ekutheni awuqonde umthetho ukuthi usebenza kanjani, nginganikela ngesikhathi sami noma izinsuku ezimbili nje ukuze ngithi ukumfundisa ngale mithetho ngoba kuyacaca ukuthi akayazi,” kusho uMcwango ekhuluma neZindaba24.
I-DA ithi yazi kahle ukuthi isizathu esenza uGumede alaxaze isekela lakhe ngale ndlela, ukuthi lisohlangothini lwe-ANC olungahambisani naye uGumede.
OLUNYE UDABA: Isinomholi omusha i-ANC eThekwini
“Lokhu kutshengisa ukuthi futhi ukwehlukana kwe-ANC sekuphazamisa ukusebenza kukamaspala, nokuholela ekutheni yona i-ANC iphule imithetho elawula ukusebenza komaspala.
“IMeya uGumede usephindile futhi watshengisa ukungawuhloniphi umthetho iLocal Government Municipal Structures Act, okubeka kucace esigabeni u-49(2) ukuthi isekela leMeya kumele libambe imisebenzi yeMeya uma kwenzeka ingabikhona,” kuqhuba uMncwango.
“Kuyoze kube inini uMaspala weTheku uholwa ngumuntu ongawuhloniphi umthetho wezwe? Kuyoze kube inini lomasipala onezigidigidi zezimali uholwa umuntu ongawulungele lo msebenzi? Lo masipala uzozithola usenkingeni enkulu,” esho.
UMncwango uthe i-DA izobhalela uNgqongqoshe wezokuBusa ngkuBambisana kanye neziNdaba zoMdabu esifundazweni, uNomusa Dube-Ncube, icela ukuba kubuyekezwe isinqumo sokuqokelwa kukaMthembu esikhundleni sokuhola lo maspala.
Bathi bafuna ukwenza lokhu uMthembu engakathathi zinqumo ngomasipala esakulesi sikhundla akusona ngokungemthetho.
Okhulumela iMeya, uMthunzi Gumede, uveze ukuthi konke lokhu okushiwo yi-DA kuwukuhlanekezela imithetho elawula omasipala ukuze ivune yona.
“I-DA iyapolitika nje kuphela, alikho iqiniso kukho konke lokhu ekushoyo. Ayikho nale yokuthi iMeya noPeer ababhekani.
“Lesi sigatshana somthetho esicashunwe yi-DA sikubeka kucace ukuthi iMeya ayiphoqelekile ukuqoka isekela layo. Kodwa-ke, kulindelekile lokhu kuleli qembu ngoba vele liyiqembu eliphikisayo yingakho lithatha izinto lizibeke ngendlela ezizovuna lona,” kuqhuba uMthunzi.
Uthe iMeya iqoke uMthembu ukuze iqinisekise ukuthi ihhovisi lisebenza ngendlela ngesikhathi ingekho, futhi uMthembu uzosebenza ngokubambisana nehhovisi likaPeer.
Uthe iMeya iye eNew York iyokwethamela umhlangano we–C40 Cities njengoSekela Mengameli wale nhlangano yomhlaba edingida ngezindaba zokuguquguquka kwesimo sezulu.
Unanele ngokuthi iMeya izohlangana nezinye iziMeya zesifazane eziqhamuka kuwona wonke amazwe omhlaba ukuze kuzodingidwa ukuthi isimo sezulu sibathikameza kanjani abantu besifazane, ikakhulukazi abasezindaweni ezisemakhaya.